(Faalo)Iraan Iyo Wadamada 5 ah oo ku heshiiyay Niyukliyerka iyo Natanyahu oo ka horyimid | BALIBUSLE.COM
« Garisa oo Bandow lagu soo rogay. Dowlada soomaaliya iyo Maamulka Jubaland oo…
Dowlada Ugandha oo ka baqaysa Alshabaab iyo in la weeraro goobaha dadkukubadan… »
(BB) Heshiis ayaa laga gaaray wadahadaladdii mudadda qaatay ee u dhexeeyayy shanta wadan iyo wadanka kaliya ama loo yaqaan P5+1. waxaa shalayto magaalada lousouna ee ku taal wadanka Switzerland lagu kala saxiixday heshiis loo aqriyay warbaahinta. kaas oo ka dhigayay in lagu heshiiyay in Wadanka Iiraan uu ogolaaday in uusan samaysay Wax hub nukliyeer ah, balse uu dhimayo tamarta loo ogolaaday in uu kafaa’idaysto. waxaa uu isticmaalayaa oo kaliya halmee kaliya meelaha uu dhustay in uu ku samaysto nukliyeerka. waxaa lagu heshiiyay 7 qodob .
1- waxaa ay dhimaysaa samaynta imika ay qorshaysay ee ah 19000. waxaa ay ka dhigaysaa 10000, tirada kobcinta yuraaniyam ee hadda ah 6,104 in laga dhigo kobcinta yuraaniyam ee hada ah 5,060. mudo 10 sano ayaa lagu heshiiyay.
2-in ladihimo Yuraniyam 3.67%,
3- balankabixid waqtiga ayaa ku dheeranaya hal ayay samaysankartaa kadib waa laqiimayn 2-3 bilood, haddii lagu qanci wayo 10sano ayay ku qaadan.
4- in la dhimo fardow in la isticmaalo 15 sano
5- waa ay samaynkartaa aqoon kororsi iyo baaritaan lama soo sari karo hub
6- in laga qaado cunaqabataynta saarnayd.
7- waa in ay tagaan wadanka Iiraan quburada Niyukliyeerka ee hay’ada caalamiga iyo qaramada midoway ka socda.(International Atomic Energy Agency, the U.N.’s nuclear watchdog, )
sikastaba waxaa wadahadaladaan ay u tahay guul labada dhinac, dhinaca hore Iiraan waxaa ay helaysaa in ay Tamarka nukliyeerka samayn karto cabsi la’aan si nabad ah, waxaa kaloo ay helaysaa in laga qaado cunaqabataynta saarnayd mudo dheer.
waxaa loo qabtay heshiiskaan in uu dhaqan galo 30 juunyo 2015. ugu dambayn iyadoo hada Iiraan looga fadhiyo in ay howsha ay ku heshiiyeen bilowdo dhaqan gelintiisa.
arinkaan ayaa waxaa ka hor yimid wadanka Yahuuda, waxaa uu sheegay Raysal wasaaraha Natanyaahuu in ay taasi suura gal ahayn in ay samaysato Iiraan tamartaas. waa arin Qatar ku ah jiritaanka dowlada israa’iil. waxaa ay sheegtay Israa’iil in aysan ka harayn ilaa ay ku kiciso loobiyiinta si ay arinkaan isu hortaagto in la ansixiyo
waxaa la horgayn doonaa heshiiskaan Golaha qaramada midowday si looga ansixiyo.
Quburada ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu dan u yahay bariga dhexe.